Health Sarokar | के हाे थर्ड ह्यान्ड स्मोकिङ ? जस्ले बढाउँदैछ बच्चाहरूमा जोखिम !
के हाे थर्ड ह्यान्ड स्मोकिङ ? जस्ले बढाउँदैछ बच्चाहरूमा जोखिम !
काठमाडाैं । चुरोट पिउँदा मानव स्वास्थ्यलाई असर गर्छ । यो सबैलाई थाह छ । अनी चुरोट पिइरहेका मानिस सँगै बस्नेलाई पनि त्यो चुरोटको धुवाँले हानि गर्दछ। यो पनि धेरैलाई थाह छ । यसलाई अङ्ग्रेजीमा सेकेन्ड ह्यान्ड स्मोकिङ भनिन्छ। तर के तपाईँलाई थाहा छ ? तपाईँ कसैले चुरोट पिउँदासँगै हुनुहुन्न तर पनि त्यो चुरोटको असरको सिकार हुन सक्नु हुन्छ। त्यो कसरी भन्दा थर्ड ह्यान्ड स्मोकिङ बाट। के हो त थर्ड ह्यान्ड स्मोकिङ ? यसले कसरी असर पुर्‍याउन सक्छ ?
धुम्रपान गर्ने मानिसले चुरोट पिउदा उसको लुगामा र वरीपरीका अन्य बस्तुमा चुरोट धुवामा हुने धेरै रसायनिक पदार्थ टाँसिन्छ र पछि ती मानिसले चुरोट निबाईसकेपछि पनि लुगामा तथा अन्य बस्तुबाट निस्केको रसायनिक पदार्थले धेरै समय पछि सम्म पनि असर गरिरहेको हुन्छ। तपाईंले घर बाहिर नै चुरोट पिए पनि निकोटिनअवशेष तपाईंको लुगामा टाँसिएर तपाईंको घर पुग्छ र घरका अन्य सदस्यमा पनि त्यसले असर गर्न सक्छ। यो नै थर्ड ह्यान्ड स्मोकिङ हो । चुरोटको धुवामा हुने रसायनिक पदार्थ चुरोट पिउने मानिसको लुगा, गलबन्दी, पन्जा, छाला, कपालमा र चुरोट पिएको कोठामा भएको कार्पेट, सोफा, चकटी टाँसिन सक्छ।
धुम्रपान आफूले नगरेपनि अरुले गरेको धुम्रपानले स्वास्थ्यमा निकै असर पारिरहेको हुन्छ । अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन (एएचए) का अनुसार, सिगरेटमा ५ हजार भन्दा बढी रसायनिक पदार्थहरू भेटिएका छन् । यी मध्ये धरै जसो रसायनहरु विषाक्त रहेका हुन्छन् । आर्सेनिक, फर्मल्डिहाइड, र टार रसायनहरु अरु भन्दा अलिक बढि बिषाक्त हुन्छन् । धुम्रपानले क्यान्सर, हृदय रोग, र अकाल मृत्युको जोखिमलाई बढाउँछ। परिवारमा कसैले धुम्रपान गर्छ भने परिवारका जुनै उमेरका सदस्यलाई पनि असर पुर्याउदछ । यो निकै चुनौतिपूर्ण छ ।
थर्ड ह्यान्ड स्मोकिङका असरहरु
थर्ड ह्यान्ड स्मोकिङको बिशेष गरि बच्चाहरूमा सबैभन्दा बढी जोखिम रहेको हुन्छ । धेरै जसो बच्चाहरु नाक र मुख नजिकै बस्तुहरु लाने भएकाले जोखिम हुने सम्भावना बढी हुन्छ। यसले निमोनिया हुने, कानमा संक्रमण हुने, दम र बारम्बार बिरामी हुने जोखिम धेरै हुन्छ । अझ परिवारमा आमा बुबा नै धुम्रपान गर्ने भएमा बच्चाहरु अझै बढि जोखिममा हुन्छन् ।
धुम्रपानको प्रयोगले मानिसको फोक्सो क्यान्सर हुन सबैभन्दा बढि सम्भावना रहेको हुन्छ । यसले बयस्क उमेरका मानिसहरुको मूत्राशय, ग्रीवा, मिर्गौला, मुख, अग्न्याशय, घाँटीलगायतलाई असर पारिरहेको हुन्छ । छोटो समयमा थड ह्यान्ड स्मोकिङले अधिक बिमारी र संक्रमण निम्त्याउन सक्छ। यसले सामान्य भन्दा बढी खोकी पनि लाग्न सक्छ ।
चुरोट पिउने आमाबाबुका छोराछोरीहरुमा दम तथा फोक्सोको राम्रोसँग विकास नहुने समस्याको जोखिम हुने भएकाले यस समस्याको समाधान भनेको चुरोट नै छाड्नु हो। बाल्यकालमा देखिने चुरोटको धुवाँको असर वयस्क अवस्थासम्म रहन्छ जसकारण श्वासप्रश्वास सम्बन्धी दीर्घकालीन रोग लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ।
अमेरिकन जर्नल अफ प्रिभेन्टिभ मेडिसिनमा उक्त अध्ययन प्रकाशित छ । अध्ययनका क्रममा सहभागीलाई उनीहरू जीवनभर चुरोटको धुवाँको कत्तिको सम्पर्कमा रहे भनेर प्रश्न गरिएको थियो र त्यसपछि अर्को २२ वर्षसम्म उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्थालाई निगरानीमा राखिएको थियो।